Amandla Wokwenza Okuthandwa Nguwe Ekumaketheni Kwe-imeyili
NgoLwesine, Februwari 25, 2010 NgoMgqibelo, Juni 27, 2015 UScott Hardigree
Ngisanda kuthatha indodakazi yami eneminyaka engu-9 ukuya Justice, umthengisi wezingubo zezingane. Kusukela ekuqaleni umphathi wangibhomba, ngezikhathi zemizuzu emi-5, nezincomo zomkhiqizo nokwenyuswa. Lokhu kuqhubeke imizuzu engama-30 ngaze ngaphoqeleka ukuthi ngimfundise ngokuqonda kwamakhasimende nokuncamelayo.
Uhlelo lwe-imeyili olubi lufana nomuntu ongathengisi ongasebenzi. Esikhundleni sokuthi ufunde ukungabi nandaba kobuso bamakhasimende akho, yizwa umthelela omubi ekuthengiseni, noma kimi, uzwe ukuqina kwamazwi abo; ukumaketha nge-imeyili kungakutshela cishe yonke into odinga ukuyazi ngamakhasimende akho futhi kukusize uthengise okuningi.
Ukudlulela ngale kokuthi “Sawubona FNAME”
Ukuqondisisa okudingekayo ukwenza uhlelo lwakho lwe-imeyili lube nenzuzo ethe xaxa selivele lisezeluleko zakho zeminwe futhi akubizi. Iza kuwe ngesimo sedatha. Angiqondile ukuvula idatha bese uqhafaza idatha, yize lokho kuzokutshela okuningi, ngikhuluma ngemininingwane ezokuvumela ukuthi wenze ngezifiso ulwazi lwekhasimende lakho ngalinye.
Impela, imikhonzo eyenziwe ngezifiso ivame ukwamukelwa kahle kepha njengoba ngishilo ku-Chief Marketer wakamuva esihlokweni, imikhankaso yoSuku lwezithandani evelele kulo nyaka yilezo ezisebenzise imininingwane ejulile, njengomlando wokuthenga namaphrofayli wamakhasimende, ukwenza okunikezwayo kwabo kube okomuntu siqu futhi ngakho-ke kufaneleke kakhulu Esihlokweni, bengikhuluma kakhulu ngabathengisi kepha izinkampani zensizakalo nazo zinemininingwane efinyeleleka kalula yokulandela (noma ngisho ukubikezela) inhloso yokuthengwa kwamakhasimende abo kanye nokukhomba amathuba okuthengisa nokuthengisa phezulu.
Yini Okufanele Usebenze Nayo?
Imithombo yedatha engenzeka ibonakala ingapheli, kepha nazi izigaba ezimbalwa nezibonelo ezithile:
Iphrofayela: Cabanga ukuthi usebenzisa inkampani yezokuvakasha kanti ngiyithemba lakho le-65 y / o, ucabanga ukuthi ngingaphendula kangcono kunikezwa okukhombisa izindawo eziphezulu ezithandwa kakhulu? Manje ake ucabange ukuthi izithombe ekunikezwayo kwakuyilezo zokuthonya okwakunezinwele zesiliva. Noma mhlawumbe ngisesikhathini sasogwini olusentshonalanga futhi i-webinar yakho ihlelelwe u-1pm empumalanga, ngabe ngingahle ngikwazi ukugcina isihlalo sami uma i-imeyili ifunda i-11am pacific?
Umlando Wokuthenga: Uma ngithenge izipho ngosuku noma namuhla, eminyakeni emibili ilandelana, ngingahle ngifune ukuthenga enye futhi kulo nyaka? Kuthiwani uma izincomo zesipho esisha bezihambisana nokuthenga kwami ​​kwangaphambilini kwalabo babanye abathengi bezipho? Ngakolunye uhlangothi, kuthiwani uma sengivele ngithengile umkhiqizo wakho oyinhloko, ucabanga ukuthi ngifuna ukuzwa ukuthi yimalini engingabe ngiyonge, ukube nje bengilindile? Esikhundleni salokho, ngabe angikhethi kangcono ngeminikelo yakho yesibili?
Umsebenzi: Mhlawumbe ngilande amaphepha amhlophe amathathu alandelanayo ngezinsuku ezingama-30, kodwa ngisazothenga, kungaba umqondo omuhle yini ukungimemela engxoxweni ngezidingo zami ezithile? Noma mhlawumbe angikaphenduli kokunikezwayo kwakho isikhathi esithile, ingabe ngilungele ukunikezwa kokuvuselela noma inhlolovo yokwaneliseka?
Izintandokazi: Cabanga ukuthi unemikhiqizo ehlukene eyi-10 kepha ngingumthengisi futhi onentshisekelo kuphela kumikhiqizo 1-5. Akufanele yini ngibekwe esigabeni nabanye abathengisi? Kuthiwani uma ngiwumsebenzisi oqondile kepha ngifuna ukuthola imininingwane yezemfundo kuphela, kunokuphromotha, ngingahlala ngishisekela futhi ngabelane ngemininingwane yakho uma ngithola kuphela engikufunayo ngempela?
Kulula futhi Akubizi Ukwenza
Ngimangele njalo lapho abathengisi be-SMB bethi ukusebenzisa idatha kuleli zinga kuphela kwabafana abakhulu. Lokho kungahle kube yiqiniso eminyakeni eyedlule, kepha namuhla noma iyiphi i-ESP efanele usawoti wayo ihlangana kalula nezixazululo zakho ze-CRM noma ze-E-commerce kanye newebhu analytics. Ukuphela kokufanele ukwenze ukuyihlanganisa futhi okubaluleke kakhulu ukuyihlole.
Tags: Activityimeyiliumsebenzi we-imeyiliukwenza ngezifiso i-imeyiliokuncamelayo kwe-imeyiliIphrofayili ye-imeyiliukuthengwa kwe-imeyiliumlando wokuthenga
Mar 19, 2010 ku-1: 14 PM
Cha, akulula futhi akubizi ukunamathisela ukuthenga kwabathengi njll ngezinhlelo zokumaketha ze-imeyili. Cishe wonke ama-ESP wokuzenzela awanikezi ngisho ne-iota yokuhlanganiswa. Kuhlala kungumsebenzi wohlelo lokusebenza lwe-POS noma uhlelo lwakho lokusebenza oluku-inthanethi ukuhlanganisa bese ucindezela imininingwane efanele “yokuhlukanisa” oxhumana naye ku-ESP.
Ama-SMB afuna okuthile okulula nokuzenzela insiza.